Olan’ny fiarahamonina nateraky ny covid-19: maro ireo fitakiana trosa sy hofan-trano miakatra fitsarana | NewsMada
Par Taratra sur 08/06/2021
Maro ireo nisedra olana tao anatin’ny fihibohana indroa miatoana. Tsy afa-bela amin’izany ny eny anivon’ny fiarahamonina sy ny tokantrano. Tonga eny amin’ny fitsarana ny raharaha matetika. Ohatra amin’izany ny trosa sy ny hofan-trano…
Betsaka ireo olana samihafa eny anivon’ny tokantrano tao anatin’ny fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana amin’ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19. Anisan’izany, ohatra, ny fitakiana trosa, ny amin’ny ady tany, ny fampiakarana ny raharaha amin’ny didim-pitsarana tsy mahafa-po, araka ny nambaran’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny fitsarana. Niantraika mivantana tamin’ny ankamaroan’ny olona ny takaitra navelan’ny covid-19. Tao ireo very asa, ny herisetra amin’ny endriny samihafa. Ny tsy fahampian’ny fidiram-bola eo anivon’ny tokantrano noho ny fandaminana any am-piasana… Tsy mahagaga raha tafiditra amin’ny trosa ny maro. Tsy nahavita firy ireo tosika samihafa natao.
“Maro ireo mampiditra raharaha momba fitakiana hofan-trano, ny olana momba ny fahafatesana ray na reny, ilàna fahazoan-dalana eny anivon’ny fitsarana manendry ny sisa velona, ny ray na ny reny na ny zanany. Tena manaraka ny filaharana ireo olona manan-draharaha eny amin’ny fitsarana amin’izao”, hoy ny lehiben’ny firaketan-draharaha eny anivon’ny fitsarana, Antananarivo, ny Me Herinatrehana Inham Ella, teny Anosy, omaly.
Fandaminana sy filaharana…
Manoloana izany, hapetraka ny fandaminana amin’ny fiverenan’ny raharaham-pitsarana aorian’ny fihibohana noho ny hamehana ara-pahasalamana. Mandeha aloha ny famoahana didim-pitsarana tokony hivoaka. Mandeha ny raharaham-pitsarana amin’ny antontan-taratasy tranainy sy ny fifanomezana fehinteny avy eo. Aorian’izany ny raharaha vaovao. Tokony ho tonga mialoha ireo hanatrika famoahana ny didim-pitsarana. “Rehefa mametraka ny fampahafantarana ny filaharan’ny raharaham-pitsarana tokony handeha any amin’ny efitra fitsarana ny mpirakidraharaha, misy ny filazana amin’ireo miditra amin’ny fizarana voalohany, faharoa, fahatelo”, hoy ihany izy.
Bilan du Covid-19: aucun décès en 48h 02/08/2021
Charbon de bois: 55.000 ariary le sac à partir de jeudi 02/08/2021
Vie de parti: le MMM prépare son assise nationale 02/08/2021